Jose Mourinho oo taageera buuxda ka helay ciyaaryahankiisii hore ee Michael Essien – Gool FM
Jose Mourinho oo taageera buuxda ka helay ciyaaryahankiisii hore ee Michael Essien
(Manchester) 17 Okt 2018. Jose Mourinho ayaa taageero balaaran ka helay ciyaaryahankiisii hore ee Michael Essien, kadib markii uu sheegay in wax badan uu ka badali doono xaalada kooxda Manchester United, kadib markii ay qaab xun ku bilaabatay xilli ciyaareedkan.
Macalinka reer Portugal ayaan xili ciyaareedkan 2018/2019 kaga bilaabanin qaab ciyaareedkiisii ugu fiicnaa ee kooxda Manchester United, laakiin maamulka Red Devils ayaa wali u muuqda in adeegiisa ay kalsooni ka muujinayaan, waxayana aaminsan yihiin awooda uu u leeyahay inuu wax kaga badali karo xaalada adag ay kooxda haatan ku jirto.
Hadaba laacibkii hore kooxda Chelsea ee Michael Essien ayaa wuxuu yiri: “Ciyaaryahan ahaan, Jose Mourinho wuxuu igu yeeshay saameyn xoogan”.
“Wuxuu i keenay kooxda Chelsea, kadibna Real Madrid, xiriir wanaagsan ayaan la leeyahay isaga, waa tababare aad u wanaagsan”.
“Waan ogahay in xaalad adag uu kaga jiro kooxda Manchester United, laakiin inta aan ka garanayo isaga, waxaan ku kasloonahay inuu awood buuxda u leeyahay inuu wax ka badalo xaalada adag ay haatan ku sugan tahay Red Devils, waan taageeri doonaa, sababtoo ah waxaan ahay taageerihiisa koowaad”.
“Xilli ciyaareedkan waa mid adag, lakiin waxay heystaan dhowr ciyaaro iyo tartamo ay ku dagaalami karaan”.
Vinicius Junior oo isku dhac ka dhex abuuraya Real Madrid iyo xiriirka kubadda cagta Brazil